China Screw Conveyor Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Yedu premium screw conveyor yakakodzera kuendesa hupfu, granular, lumpish, yakanaka- uye yakakora-yakashongedzwa zvinhu senge marasha, dota, samende, zviyo, zvichingodaro. Iyo yakakodzera tembiricha yezvinhu inofanira kunge iri pasi pe180 ℃
Yedu premium screw conveyor yakakodzera kuendesa hupfu, granular, lumpish, yakanaka- uye yakakora-yakashongedzwa zvinhu senge marasha, dota, samende, zviyo, zvichingodaro. Iyo yakakodzera tembiricha yezvinhu inofanira kunge iri pasi pe180 ℃. Kana icho chinhu chiri nyore kutorwa, kana kubatanidzwa, kana icho chinhu chakanamatira zvakanyanya, hazvikurudzirwe kuendesa pamushini uyu.
Shaft yakasungirirwa ne screw yakaiswa mune yechipfuva mhando casing. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa kana zvakagomara zvinodyiswa mumushini uye zvinofambiswa zvakanangiswa kumberi kunzvimbo inobuditsa nechinotenderera sikuru yakasungwa pamubato.
Kuti uwane inoenderana nzvimbo yekuburitsa yezviyo sikuru conveyor, chikafu chinotakurisa conveyor, furu yekufambisa kana yemart conveyor, iwe unokurudzirwa zvikuru kuti utarise chigadzirwa chedu chine ruzivo rwakanyorwa pazasi.
1. Iyo michina inouya ne modular dhizaini uye yakanakisa yekugadzira.
2. Iyo inlets nezvitoro zvinogona kugadziridzwa sezvinodiwa
3. Dzimba dzakakamirwa neguruva dzinotungamira kune yakakwira hutsanana.
4. Screw conveyor iri nyore kuchengetedza.
5. Iyo yakaderera yekushandisa simba yekushandisa pfuma inowanikwa.
6. Zvese zvinhu zvinogadzirwa neyekudya-giredhi zvinhu kana kuuya neakakosha chikafu-giredhi kupfeka.
7. Gedhi rinopfachukira rine switch yekudzivirira yemunhu inowanikwa.
8. Inlet trough yakagadzirirwa neyakafambira mberi solid-yekumhara sikuruu yeunifomu yekuchengetedza bin kuburitsa.
9. Iyo yepakati yekubuda yeiyo screw conveyor inouya neiyo slide gedhi.
10. Iyo yakawanda-isina-anti-corrosive kupfeka inoshandiswa kune ekunze mafomu.
11. Iyo yakananga drive mashini inowanikwa.
12. Muchikona chinotakura, pane kubatana kunochinja pakati pekutyaira uye shaft shaft.
13. Iyo yakatwasuka maitiro uye akarerekera maitiro ese ari maviri anowanikwa kune izvo zvinhu kuendesa, kugovera, kuunganidza, kusanganisa uye kubuda.
14. Iyo shaft shaft inobatana neyakarembera kutakura, musoro wemusoro, tailhaft nekubatanidzwa kwakabatanidzwa. Saka axial mafambiro haadiwe pakuiswa, uye kudzivirirwa, zvichiita kuti kugadzirisa kuve nyore.
15. Nheyo dzemusoro wemusoro uye muswe shaft zvese zviri kunze kwekasi kweiyo screw conveyor. Kutakura kwega kwega kunouya neyakawandisa-yekuisa chisimbiso tekinoroji yekuwedzera hupenyu hwebasa.
1. Iyo isina simbi sikuru uye yekumhanyisa inogona kuwedzerwa gorosi kudzikisira kana hupfu kuti huve nani hutsanana.
2.Paddle-type screw inogamuchirwa yekusanganisa.
3. Yakasarudzika jasi repende inosarudzika kune yedu screw conveyor.
4. Masuwo epasi anosarudzika kuitira nyore kuchenesa sikuru uye muchimwiro.
Type Max. Kukwanisa (t / h) Max. REV (R / Maminitsi) Screw Dhayamita (mm) Screw penguva (mm)
Yakadzika Dhivhosi Zvishandiso Discharger